China na ulo oru ndi na acho acho achoputara ulo nke ndi na acho acho BH003 Beihua
Kpọọ Anyị: + 86-15176918352
Board Mịnịstrị Ceiling Board
Eriri Cekwado iko
Inlass na Glass Wool
Iko iko Wool
Akwa Wool Blanket
Ngwunye Oku nke Mbara BH003
N’ebe a na-emepe emepe, bọọdụ ajị anụ nwere ike belata mkpọtụ nke sistemụ nkwukọrịta, akụrụngwa ụlọ ọrụ, na ọrụ ndị ọrụ, belata imegharị mkpọtụ ụlọ, ma mee ka ndị ọrụ lekwasị anya nke ọma, melite arụmọrụ ọrụ ma belata ike ọgwụgwụ ọrụ. N'ime gburugburu ụlọ ọrụ mechiri emechi, bọọdụ owu a na-amịkọrọ ma na-egbochi mgbasa nke ụda ebili mmiri na ikuku, na-arụpụta ihe mkpuchi ụda nke ọma, na-ejide nzuzo nke ụda ụlọ, na -ebelata nnyonye anya nke ụlọ ndị dị n'akụkụ.
N'ime ụlọ klaasị ma ọ bụ ụlọ ọgbakọ, ndị na-ege ntị kwesịrị ịnụ olu olu ya nke ọma n'ọnọdụ ọ bụla iji hụ na a ghọtara ya nke ọma. Ya mere, ekwesịrị ịhọrọ ihe ndị eji ewu ụlọ iji hụ na ụda nke ime ụlọ doro anya.
Ihe a na –emeghari ma obu nke edobere nke ulo ahihia nwere ezi nke oma n’ileghari udiri olu. Ogwe nku a na-eji ajị anụ ahụ na-eji eriri toro ogologo dị elu dị ka akụrụngwa maka mmepụta. Waveda ụda na-eme ka eriri ahụ resonate ogologo oge, nke nwere ike ịmegharị ụda ụda ọzọ ka ọ bụrụ ike. N'otu oge, oghere dị omimi dị n'ime bọọdụ ajị anụ na-eme ka e nwekwuo ụda ebili mmiri ịbanye na ịgbatị oge njem ha. N'okpuru omume esemokwu, a na-agbanwe ike ụda ike ka ọ bụrụ ike ọkụ.
Ntuziaka maka ntinye nke osisi ajị anụ
Nke mbu, hota ihe ndozi ulo ozo di iche iche dika okwuru ma obu ihe ichoro.
Nke abụọ, a ga-etinye ogwe ajị anụ ma jiri ya na gburugburu ebe ọnọdụ ọmụrụ nwa dị n'okpuru 80%.
Nke ato, itinye ntinye nke ogwe mmiri di n’ime ulo kwesiri iju ya aru oru, ekunye otutu ihe di na elu ulo, a gha acho inyocha mmiri ndi ahu tupu e wuo ya.
Nke anọ, mgbe ị na-etinye ogwe ube ịnweta, a ga-eyi uwe aka dị ọcha iji gbochie ogwe ndị ahụ erughị unyi.
Nke ise, ime ụlọ ahụ emesia nke ikuku ajị anụ ga-adịrịrị ikuku, ma mechie ụzọ na windo mgbe oge mmiri ruru.
Nke isii, n'ime awa iri ise a rụchara bọọdụ gluu, ọ gaghị enwe mkpatụ siri ike tupu a gwọọchaa.
Nke asaa, mgbe ị na-etinye n'ime otu gburugburu, biko jiri otu ụdị ngwaahịa a.
Nke asatọ, bọọdụ owu a na-ejighị ọla nwere ike iburu ihe ọ bụla dị arọ.
Nke gara aga: Minenweta Minenweta Nweta Bnweta Mac BD001
Osote: Minenweta Minenweta BCnweta Mac0000
Minenweta Minenweta BCnweta Mac0000
Ngwunye Minenweta Mac
Minenweta Minenweta Nweta Bnweta Mac BD001
Minenweta Minenweta Mpekere Field BH004
Minenweta Minenweta BCnweta Mac000000
Na-atụ anya iso gị rụkọọ ọrụ!ajuju
Mmepụta 2020 maliteghachiri